Tababaraha Brazil Oo 'Dilaa Wayn' Ku Tilmaamay Coutinho [Sidee] %
Maamulaha xulka qaranka kubada cagta Brazil, ninka lag magacaabo Tite ayaa wuxuu aaminsan yahay in Philippe Coutinho, uu haysto wax walba oo tayo ah, taasoo looga baahnaa ciyaartoyda kubada cagta ayna ka dhigayso mid dilaa ah.
Coutinho oo hada udheela Barcelona, ayaa wuxuu uga soo wareegay Liverpool, bishii June ee fasal ciyaareedkan markaasoo lagu soo iibsaday aduun lacageed dhan 192 Milyan oo Dollar-ka Mareykanka ah, taasoo ka dhigaysa xidigii ugu qaalisanaa taariikhda Barca.
Imaanshaha wiilkaan reer Brazil ee Camp Nnou ayaa ka dambeysay kadib markii uu faarujiyay Neymar Jr, kaasoo uweecday dhanka PSG, iyadoona tan iyo markii uu Coutinho soo cago dhigtay uu soo bandhigay muuqaal ciyaareed heer sare ah.
“Wax walba oo tayo ah, oo laga maarmaan u ah ciyaaryahan, waa uu haystaa Coutinho,” ayuu Tite usheegay warfidiyeenka ka hor ciyaartii Germany.
“Guud ahaan, shaqada uu qabanayo Coutinho waa mid xoog badan,” ayuu hadalkiisa kusii daray, hogaamiyaha qaranka tirada ugu hantay koobka aduunka.
“Waa uu ka talaabay tijaada, waa mid wax tar leh, waa mid si adag ugu shaqeeyo garoonka waliba Masaafo badan, waa mid xwaaro sare leh, waana mid dilaa ah, waana mid caawiya kubadaha waana mid qaan-gaar noqday oo sidoo kale muhiim ah.
“Isaga iyo Willian waxay yihiin kuwa si fiican isugu fahansan dhanka weerarka – Douglas Costa ayaa sidoo kale qeyb ka ah – [Roberto] Firmino ayaa isana doorkiisa qaata, sidaas darteeda wax fiican ayuu Liverpool kusoo sameeyay.
“Hada wuxuu usocdaa inuu hogaamiyo qaran wayn oo Brazil la dhoho, waxaan ka rajaynayo isaga iyo ciyaartoyda kale, waa inay dhaliyaa oo aan si adag ushaqeeyaa kulamada nagu soo wajahan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay tababare Tite.